ragoborn@gmail.com, Author at Injiilka oo ku qoran af-soomaali - Page 2 of 7
Suuradda Al-Bayyinah (Surah 98-Caddaynta Cad) waxay sharraxaysaa shuruudaha laga rabo qofka wanaagsan. Waxay leedahay Dadkana waxaan Eebe caabudiddiisa ahayn lama farin iyagoo u kali yeeli… Read More »Yuu ahaa Nabi Ayuub,waa maxay muhiimaduu maata leeyahay?
Nebi Ilyaas (ama Eliiyaah) waxaa lagu xusay magac ahaan saddex jeer suuradaha Al-Anam iyo As-saffat. Waxay noo sheegaan Iyo Zakariye, Yaxye, Ciise ILYaas, Dhammaana waxay… Read More »Kumuu ahaa nebi Ilyaas? Sidee buu maanta na hagi karaa?
Suuradda Yuusuf (Suuradda 12 – Yuusuf) waxay ka sheekaynaysaa Xusuusta Yuusuf. Yuusuf wuxuu ahaa wiilkii Yacquub , ina Isxaaq ), ina Ibraahim . Yacquub wuxuu… Read More »Yuu ahaa Yuusuf? Maxay ahayd Calaamadiisu?
Waxaan baarnay usbuucii ugu dambeeyay ee Ciise Masiix. Injil wuxuu qoray in iskutallaabta lagu qodbay maalintii 6 -Jimce Wanaagsan, waxaana dib loo soo nooleeyay Axaddii… Read More »Fahamka & Helitaanka Hadiyadda Nolosha ee Ciise Masiix
Surah Ar-Ra’d (Surah 13-Onkod) waxay sharraxaysaa loolan guud ama dhaleeceyn ka timaadda gaalada Haddaad yaabtana waxaa Yaaba Hadalkoodii Ahaa ma Markaan noqonno Carro yaa Markaas… Read More »Sara kicidda waa miraha koowaad: Nolosha adigaa leh
Ciise Masiix waa la khiyaameeyay oo iskutallaabta lagu qodbay maalinta Quduuska ah eeYuhuudda ee Iidda Kormaridda, oo hadda loo yaqaan Jimcaha Wanaagsan. Iiddii Kormaridda waxay… Read More »Maalinta 7 – Sabtida nasashada ah
Suuradda 62 (Jameecada, Jimcaha – Al-Jumcah) waxay noo sheegaysaa in maalinta salaadda ee muslimiintu ay tahay Jimco. Laakiin Suuradda al-Jumu’ah ayaa marka hore bixinaysa caqabad… Read More »Maalinta 6-Ciise Masiix iyo Jimco wanaagsan